FOKO: Barcamp nahomby teto Madagasikara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Novambra 2018 3:55 GMT
Ny Asabotsy 4 oktobra 2008, natao tao Hotel IVOTEL, Ambohidahy ao Antananarivo renivohitra ny BarCamp Madagascar. Nokarakarain'ny FOKO, nahazo vatsy tamin'ny Rising Voices, ity no hetsika voalohany tahaka izany teto Madagasikara. Ny mpamatsy tolotra aterineto lehibe indrindra ao amin'ny firenena, Moov, no nanohana ny BarCamp tamin'ny fanomezana fahafahana miditra aterineto maimaim-poana ho an'ireo mpandray anjara rehetra tamin'ny hetsika. Misaotra ireo mpanohana satria maimaim-poana ny fidirana, anisan'izany koa ny kafe, ny sakafo ary T-shirts fahatsiarovana ho an'ireo mpandray anjara.
Jogany manoratra momba ireo fanamby natrehin'ny FOKO tamin'ny fikarakarana ny hetsika:
Rehefa nieritreritra hikarakara Barcamp eto Madagasikara izahay, dia nanantena ny handray ireo mpandray anjara tsara indrindra ao an-tanàna, eto amin'ny firenena sy manerantany. Telo volana no nanaovanay fandresena-dahatra tamin'ireo olonay manokana mba handray anjara.
Manome ny toe-draharaha izy:
Jogany mamaritra ny lafiny mazava indrindra tamin'ny hetsika:
Manome ny famintinana ny fizotry ny andro koa izy. 75 teo ireo mpandray anjara nanatrika ny fihaonana.
Nanatrika ny BarCamp i Eduardo Ávila avy ao amin'ny Voces Bolivianas. Nanampy ireo tanora bilaogeran'ny FOKO izy mba “hitantara” ny hetsika. Napetraka ny latabatra miaraka amin'ny finday solosaina efatra tao ambadiky ny efitrano mifandray amin'ny wifi haingam-pandeha, ary maro tamin'izy ireo no nisioka mivantana ny hetsika.
Manana vaovao marobe momba ny hetsika ny Barcamp Wiki. Nanaparitaka ny hetsika ny vondrona Facebook iray. Ato, ato sy ato ireo sary nandritra ny hetsika.
Ity ny famintinana ny fivoriana voalohany.
Sixthman ao amin'ny Madagascar Not The Movie mamaritra ny zava-niainany:
Pati nizara fampahafantarana momba ny diany tany Bruxelles mba hanatrika ny fihaonamben'ny Global Interdependence.
Andry ao amin'ny The Malagasy Cyber Adventure mitatitra hoe:
Mandritra ny volana Jona, Jolay sy Aogositra, na nandeha niala sasatra na sahirana tamin'ny fanadinan'izy ireo ny bilaogeran'ny Foko. Niverina izy ireo tamin'ny volana Septambra niaraka tamin'ny bilaogy bebe kokoa. Ireto lahatsarotra sasany nasongadina.
16 ora izayCivic Media Observatory